Galmudug Oo Sheegtay Inay Gacanta Ku Hayaan D/ Guriceel
Saturday October 23, 2021 - 20:38:44
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda Galmudug, oo uu sheegay in ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug, isla markaana laga saaray magaalada kuwii horey gacanta ugu hayay.
Wasiirka Warfaafinga Galmudug Mudane Axmed Shire Falagle oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in muddo bil ah ay gacanta ku hayeen magaalada, kuwaasi oo uu sheegay inay diideen in wax kasta lagu dhameeyo wada hadal oo ay si nabadgelyo ah uga baxaan magaalada, isagoo intaa ku daray in saaka ay weerar ku soo qaadeen fariimaha ciidamada dowladda iyaga oo soo qalday arday.
''waxaa nasiib daro ah ardayda dugsiyada Qur’aanka, Haween iyo dad da’ah inay soo weeraraan fariisimaha ciidamada. ciidamadana si kulul ayay ugu jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabtii ku habooneed, halkaa waxaa ka yimid farxadka arday yaryar oo ah ardayda dugsiga Qur’aanka ah, anaga oo ugu digayna ciidamada inay si raxmad leh ugula dhaqmaan carruurta yar yar ee lasoo qalday”.waxaa yiri Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Mudane Axmed Shire Falagle Wasiirka Warfaafinta dowlad Goboleedka Galmudug ayaa xusay in magaalada ay iminka degantahay oo si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidamada qalabka sida, laguna dabajoogo kuwii ka dambeeyay falka ka dhacay magaalada, si loola tiigsado sharciga.
Mudane Axmed Shire Falagle ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay magaalada inay dib ugu soo laabtaan guryahooda.
R/ Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Ayaa Ku Dhawaaqay Xukuumaddu Ay Bixinayso $1 Milyan Oo Dollar